हरेक समय थकाइ र निद्रा किन लाग्छ ? जान्नुहोस् १० कारण र बच्ने उपाय – Ramailo Sandesh
केही मानिस हर समय थकान महसुस गर्दछन् । जसकारण हर समय निन्द्रा लाग्छ र कुनै पनि काम गर्न मन लाग्दैन ।यस्तो किन हुन्छ ? यसबाट छुटकारा पाउन के गर्न सकिन्छ ? यसबारेमा हामी यहाँ चर्चा गर्छौँ ।
राती राम्रोसँग ननिदाउनु
यसको पहिलो कारण पूर्ण निद्रा नपाउनु हो। यसले तपाईंको स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पार्न सक्छ। सबैजनासँग कम्तिमा ७÷८ घण्टा निदाउनुपर्छ। आफ्नो तालिकामा निन्द्रालाई प्राथमिकतामा राख्नुहोस्। सुत्ने बेला भन्दा पहिले ल्यापटप, फोन र टिभी नहेर्नुहोस् । यदि तपाईं अझै निन्द्रा लाग्दैन भने डाक्टरलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
केहि मानिस निद्रा लाग्न नसक्ने रोगको कारण सुत्न असमर्थ छन्। यो समस्या हो जहाँ सास अचानक केहि समयको लागि रोकिन्छ र यसको कारणले गर्दा निन्द्राबाट मानिस ब्युझिन्छ ।
आधा निदाएको कारण, मानिसहरूलाई यो समस्या थाहा पनि हुँदैन। ८ घण्टा विछ्यौनामा सुतेपछि पनि निन्द्रा राम्रोसँग पूर्ण हुँदैन र थकान र सुस्त हुन्छ ।
यदि तपाईं धेरै तौल हुनुहुन्छ भने यसलाई कम गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, धुम्रपान छोड्नुहोस्, हिंड्नुहोस् र यदि तपाईं अझै आराम गर्नुहुन्न भने सीपीएपी मास्क लगाउनुहोस्।
कम र नराम्रो खराब खानपानले पनि तपाइंलाई धेरै समय थाकेको महसुस गराउन सक्छ।यस कारण, रगतमा चिनी कम हुन्छ र कम हुन्छ । खराब खानपानले रगतमा चिनीको मात्रा सामान्य राख्छ।बिहान ब्रेक फास्ट गर्न कहिल्यै नछोड्नुहोस् । आहारमा प्रोटीन र कार्ब्स समावेश गर्नुहोस्। खाना रुचेन भने पनि अलिअलि गर्दै केही खानुहोस्।
एनीमिया महिलाहरूमा थकानको मुख्य कारण हो। महिनावारीको कारण, महिलामा आइरनको कमी हुन्छ।टिश्यु र अ्गहरूमा अक्सिजन पुर्‍याउन रातो रक्त कोषहरू आवश्यक हुन्छ।आइरनको अभाव पूरा गर्नको लागि आइरनयुक्तखाना खानुहोस् ।
अक्सर मानिसहरू सोच्दछन् डिप्रेसन मानसिक रोग होतर यसले शारीरिक असर पनि पार्दछ। थकान, टाउको दुख्ने र भोकको कमी यसको प्रमुख लक्षणहरू हुन्।यदि तपाईंसँग केहि हप्ताको लागि यी लक्षणहरू छन् भने, डाक्टरलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। तपाईं यसको औषधि वा थेरापी पनि लिन सक्नुहुन्छ।
प्रशस्त कफि पिउनु
क्याफिनको थोरै मात्राले एकाग्रता बढादछ । साथै यसको उच्च मात्राले मुटुको धडकन, रक्तचाप र घबराहट बढाउन सक्छ। यस कारणले, केहि व्यक्तिहरू हर समय थकित हुन्छन्। तपाईको कफी, चिया, चकलेट र सफ्ट ड्रिंक बिस्तारै घटाउनुहोस्।
मधुमेह बिरामीहरूको रगतमा सुगर जाने रक्तप्रवाहमा ब्लडस्ट्रीम रहन्छ र यो ऊर्जामा प्रभाव पार्दछ ।यसको कारणले गर्दा, शरीरमा हरेक समय थकान रहन्छ। यदि तपाईंलाई पनि त्यस्तो गुनासो छ भने पहिले मधुमेहको समस्या छ भने तपाईं खाना र व्यायामको साथ आफ्नो रगत चिनी पनि नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ।
डिहाइड्रेशन पनि तपाईको थकानको कारण हुन सक्छ।चाहे तपाईं घर भित्र वा बाहिर काम गर्दै हुनुहुन्छ, शरीरलाई चिसो र राम्रोसँग सञ्चालन गर्न धेरै पानीको आवश्यक छ। दिनभरि धेरै पानी पिउनुहोस्। कुनै पनि शारीरिक गतिविधि प्रदर्शन गर्नु अघि र पनी पानी पिउनुहोस्।
यदि तपाईं आफ्नो दैनिक काममा धेरै थकित महसुस गर्नुहुन्छ भने, यो मुटु रोगको संकेत पनि हुन सक्छ।यदि थकानको कारणले तपाईंलाई काम गर्न समस्या भइरहेको छ भने डाक्टरलाई भेट्नुहोस्।
खानाले हुने एलर्जीहरू
केही चिकित्सकहरूका अनुसार खानाको एलर्जीले तपाईंलाई सबै समय निन्द्रामा पार्छ र तपाईंलाई यसको बारेमा सचेत नहुन सक्छ।यदि तपाइँ खाना खाएपछि नै निद्रा लाग्छ भने, यसको मतलब यो हो कि तपाइँले खाएको कुरा पचाउन तपाईंलाई केही कठिनाई भइरहेको छ।
यस कारण तपाईं थकित हुन सक्छ। यदि तपाइँ खाना खाए पछि थप निन्द्रा महसुस गर्नुहुन्छ भने, केहि थप खानुहोस् र हेर्नुहोस् यदि तपाईंको सुस्ती टाढा जान्छ कि हुँदैन। यदि यो समस्या अझै पनी जारी छ भने, तब तपाईं डाक्टरलाई सम्पर्क गर्न र खाना एलर्जी परीक्षण पनि गर्न सक्नुहुनेछ।